KAOMININA AMBATONDRAZAKA : Raikitra ny fanadiovana tanàna mialoha ny foara
Taorian’ny Fetim-pirenena dia fantatra fa hiroso amin’ny foara indray ny Kaominina Ambatondrazaka renivohitra amin’izao fotoana izao. 30 juin 2017
Miroso amin’ny fanadiovana ny tanàna, araka izany, ireo tompon’andraikitra isan-karazany eto Ambatondrazaka indrindra fa ny avy eny anivon’ny Kaominina.
Misy, araka izany, ny fanalana ny fako rehetra eto an-tampon-tanàna izay nasiana fampitomboana ireo olona sy ny ora fanesorana izany hoy ireo olona izay miandraikitra ny fanesorana ireny tobim-pako ireny.
Isan’ny nohamafisin’ny Ben’ny tanànan’Ambatondrazaka renivohitra Rafidimanana Louis Felicité ihany koa io sehatry ny fanadiovana ny tanàna io ary nanentanany ny rehetra mba hanaraka hatrany ny toromarika avy eny amin’ireny tompon’andraikitra napetraky ny Kaominina ireny.
Hentitra ny mpitantana ny Kaominina amin’ny fampiharana ny lalàna amin’ireo olona izay minia manary fako any anaty tatatra. Tsy azo ekena intsony koa, hoy izy ireo, ny fametrahana na fanorenana trano eny ambony tatatra izay lasa olana hatrany isaky ny hisy ny fanadiovana lakan-drano faobe.
Raha nampitaraina ny mponina ny fako tao Tanambao teo aloha teo dia fantatra fa efa afaka avokoa izany amin’izao fotoana izao. Mbola olana hatrany anefa ny eo amin’ny sehatry ny fitaovana izay tsy ampy hoentina manatanteraka ny asa raha ny nambaran’ny Ben’ny tanàna.